CC Warsame oo ka fal-celiyay qoraal uu qoray Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoraalka taliyihii hore ee nabadsugidda marna xukuumadda iyo Baarlamaan laguma soo hadal qaadin. Dawlad Goboleed warkeeda daa. Wuxuu sheegay in qorshaha Madaxweynaha lagu hagayey sirdoonka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shaqada sirdoonka laga rabo waxay ku xiran tahay aragtida xukun ee la doonayo. Haddii xukun kalitalis ah laga hadlayo awoodda, hantida, tamarta iyo waqtiga waxaa la gelinayaa amniga kalitaliska. Sirdoonku wuxuu ka shaqaynayaa basaasidda, baacsiga iyo sumcad dilka mucaaradka, cabsi ku haynta kuwa daacada u ah rajiimka, shirqool iyo khaarijin, shaki kala gelinta bulshada, jahwareerinta iyo jihaynta ra’yiga dadwaynaha si loo jeclaysiiyo rajiimka, loogana raarido in la’aantii dalku dumayo.
CCWarsame – KEYDMEDIA ONLINE